Careem အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် XAPK（24.2MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Careem - Rides, Food, Shops, Delivery & Payments
နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များကိုအက်ပ်တစ်ခုတည်းတွင်ပြုလုပ်နိုင်သည့်ကမ္ဘာသို့ခြေလှမ်းလှမ်းပါ။ စားသောက်ဆိုင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များမှအစားအစာများကိုကြိုတင်မှာယူပြီးအွန်လိုင်းငွေပေးချေခြင်းဖြင့်သင်၏လက်ကျန်ငွေကိုထပ်မံဖြည့်ပါ။
တစ်ခုတည်းသောလော့ဂ်အင်တစ်ခုဖြင့်သင်၏ဒေသဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးကိုတစ်နေရာတည်းတွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပြီးသင့်အတွက်အရေးကြီးဆုံးအရာများကိုအာရုံစိုက်ရန်အချိန်ပိုပေးသည်။ ထိုထက်မကရှိပါတယ်! ကျွန်ုပ်တို့၏သစ္စာရှိမှုအစီအစဉ်ဖြစ်သော Careem Rewards၊ စီးနင်းခြင်းနှင့်အစားအစာတို့အတွက်အထူးလျှော့စျေးများ၊ မိတ်ဖက်များထံမှကမ်းလှမ်းမှုများ၊ ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်လှူဒါန်းမှုများနှင့်အခြားအရာများကိုရှာဖွေပါ။ အချက်များနှင့်ပတ်သက်။ အံ့သြ? သင်လိုအပ်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြု၍ ရရုံမျှနှင့်၎င်းတို့ကိုသာရနိုင်သည်။
ယခုစီးသွားရန်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းပါသို့မဟုတ်တစ်မြို့မှတစ်မြို့ *၊ ဒေသတွင်းအငှားယာဉ်ဝန်ဆောင်မှု * ဘတ်စ်ကားနှင့်စက်ဘီးရွေးချယ်ခြင်းများအပါအ ၀ င်စျေးသက်သက်သာသာနှင့်သက်သောင့်သက်သာရှိသောကားအမျိုးအစားများဖြင့်နောက်မှရွေးရန်စီစဉ်ပါ။ ကားငှားရမ်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ သင်သွားလိုသည့်နေရာသို့ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။
စားသောက်ဆိုင်တစ်ထောင်ကျော်မှသင့်အိမ်သို့အစားအစာမှာယူပါ။ နှင့်သင်၏အချိန်မှန်၌သင်၏ပေးပို့ခြေရာခံ။ အနီးအနားရှိအကောင်းဆုံးများ၊ နိုင်ငံတကာ hits များနှင့်အခြားအရာများမှရွေးချယ်ပါ။ သင်၏ Careem NOW ပို့ဆောင်ရေးအက်ပလီကေးရှင်းကိုယခု Careem Super App တွင်အလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်သည်။
ကြက်ဥနှင့်နို့အားလုံးတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း။ အခုခေါင်းကိုက်ခြင်းအတွက် Panadol လိုအပ်ပါသလား။ အနည်းငယ်သောထိပုတ်ခြင်းများတွင်သင်၏နေ့စဉ်အခြေခံလိုအပ်ချက်များ၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှုပစ္စည်းများနှင့်နေရာအမျိုးမျိုးမှအထူးပစ္စည်းများကို ၀ ယ်ပါ။
စာရွက်စာတမ်းများ၊ သင်ချစ်မြတ်နိုးရသူတစ် ဦး အတွက်ကဒ်ပို့ခြင်းသို့မဟုတ်သင်ရွေးချယ်သောဆိုင်တစ်ဆိုင်မှပစ္စည်းများကို၎င်းကိုကောက်ယူပါသို့မဟုတ်ဝယ်ယူပါစေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုဖြင့်ဝယ်ယူ ။ သင်ဘာတွေစုဆောင်းထားတယ်၊ ဘယ်ကဘယ်မှာလဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့ချက်ချင်းဘာကိုယူထားသည်ကိုပြောပြပါ။
Careem ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးအတွက် စုစည်း၍ လုံခြုံစိတ်ချရသောအွန်လိုင်းငွေပေးချေစနစ်။ အခြားမကြာခဏငွေပေးချေမှုများကိုလည်းပြုလုပ်နိုင်သည်။
Careem တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များကိုဂရုစိုက်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောနေ့စဉ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုတစ်နေရာတည်းတွင်စုစည်းထားပြီးလွယ်ကူစွာထိတွေ့နိုင်သည်။ သူတို့သည်သင်၏ဒေသဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောကြောင့်သင်အတွက်အရေးကြီးသောဝန်ဆောင်မှုများကိုသင်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ အဆုံးမှာတော့သင့်ဘဝမှာသင်အများဆုံးဂရုစိုက်တာကိုလုပ်ပြီးနေ့စဉ်လုပ်ငန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ထံအပ်နှံပါတယ်။
* ၀ န်ဆောင်မှုရရှိမှုသည်နေရာဒေသအလိုက်ကွဲပြားသည်
ဘာအသစ်လဲ Careem - Rides, Food, Shops, Delivery & Payments 11.37
How to delivery food from Careem App | Complete details | APPS KI DUNYA |
APPS KI DUNYA
Careem - Rides , Food , Delivery & Payments #shorts
How to Get more Rides in CAREEM Uber |3tricks to make more money in CAREEM Uber
how to work careem now food delivery
Dx Dilshad Rabin
Road Rider delivery jobs
Dubai vlogs with zeeshan